လူမှုရေးအထီးကျန်မှုပျိုးထောင်မှုသည်လူကြီးဘ ၀ တွင်စူးရှသောအီသနောမှ dopamine နှင့် norepinephrine တုန့်ပြန်မှုများကိုနျူကလိယ accumbens တိုးပွားစေသည် - Your Brain On Porn
လူမှုအထီးကျန်မှုတွေမွေးမြူ (2014) နျူကလိယလူကြီးအတွက်စူးရှသောအီသနောမှ dopamine နဲ့ norepinephrine တုံ့ပြန်မှု accumbens တိုးပွါး
အရက် Clin Exp Res ။ 2014 Nov;38(11):2770-9. doi: 10.1111/acer.12555.
Karkhanis AN1, ဂျွန်လော့ခ် JL, McCool BA ဘွဲ့, Weiner JL, ဂျုံးစ် SR.
အစောပိုင်းဘဝစိတ်ဖိစီးမှုအရက်သေစာစွဲဖို့ပိုမိုအားနည်းချက်နဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ သို့သော်နာတာရှည်ကလေးဘဝ / ဆယ်ကျော်သက်စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်အရက်စွဲများတိုးမြှင့်အန္တရာယ်ဆက်သွယ်ထားသောအာရုံကြောအလွှာဟာကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်ကြသည်မဟုတ်။ နျူကလီးယပ် accumbens (NAc) ခုနှစ်, dopamine (DA) နှင့် norepinephrine (NE) အချက်ပြအလှနျစိတ်ဖိစီးမှု, စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း, အီသနော (EtOH) အပါအဝင်အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါး, ကလွှမ်းမိုးနိုင်ပါတယ်။ ဤတွင်ကျနော်တို့ဆယ်ကျော်သက်စိတ်ဖိစီးမှုဟာ NAc အတွက် DA နှင့် NE လွှတ်ရာ EtOH sensitivity ကို impact ဖြစ်နိုင်သည်ကိုမည်သို့နာတာရှည်၏ပိုကောင်းတဲ့နားလည်မှုရဖို့ရက်၏အမူအကျင့်အန္တရာယ်အချက်များအတွက်အမြဲတည်သောတိုးမှုကြောင့်အစောပိုင်းဘဝစိတ်ဖိစီးမှုတစ်ကြွက်မော်ဒယ်အလုပ်။
Long-Evans ကြွက်များအားအုပ်စုလိုက်တည်းခိုခြင်း (GH;4rats / လှောင်အိမ်) သို့မဟုတ်လူမှုရေးအရအထီးကျန်ခြင်း (SI; 1 ကြွက် / လှောင်အိမ်) ကိုမီးဖွားပြီးနောက် ၂၈ ရက်တွင်စတင်သည်။ ရက်သတ္တပတ် ၂၈ ရက်နေ့တွင်စတင်သည်။ ၂၈ SI နှင့် GH ကြွက်များကိုအရွယ်ရောက်စတွင်စိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူများအတွက်စမ်းသပ်ခဲ့သည်။ (မြင့်မားသောပေါင်းဝင်္) နှင့် EtOH (၁ နှင့် ၂ ဂရမ် / ကီလိုဂရမ်၊ intraperitoneally) ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို NAc DA နှင့် NE အပေါ် microdialysis ဖြင့်အကဲဖြတ်ခဲ့သည်။
SI တိရိစ္ဆာန်များသည် GH တိရိစ္ဆာန်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်စိုးရိမ်စိတ်ကဲ့သို့သောအပြုအမူများပိုမိုများပြားလာသည်။ SI သည် DA သို့မဟုတ် NE ၏အခြေခံအဆင့်များအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိသော်လည်းအခြေခံ DA အဆင့်များသည်စိုးရိမ်ပူပန်မှုအစီအမံများနှင့်အပြုသဘောဆက်နွယ်မှုရှိသည်။ အဘယ်သူမျှမသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှု 1 ဂရမ် / ကီလိုဂရမ် EtOH နှင့်အတူလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်နေစဉ်အပြင်,2ဂရမ် / ကီလိုဂရမ်ထိုး SI တိရိစ္ဆာန်များအတွက်သိသိသာသာသာ။ ကြီးမြတ် DA လွှတ်ပေးရန်သွေးဆောင်။ ထို့အပြင် EtOH (2 g / kg) သည် SI ကြွက်များတွင် NAc NE အဆင့်ကိုမြင့်တက်စေသည်။
ဤရလဒ်သည်နာတာရှည်အစောပိုင်းဘဝစိတ်ဖိစီးမှုတစ်ခုစူးရှ EtOH စိန်ခေါ်မှုတုံ့ပြန် accumbal DA နှင့် NE လွှတ်ပေးရန် sensitizes ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါ NAc အတွက် DA နှင့် NE လွှတ်ပေးရန်ဒိုင်းနမစ်၏တစ်ဦးက သာ. ကြီးမြတ် EtOH sensitivity ကို SI ကြွက်များတွင်လေ့လာတွေ့ရှိကြသည် သာ. ကြီးမြတ် EtOH Self-အုပ်ချုပ်မှုနှင့်တူရက်၏အမူအကျင့်အန္တရာယ်အချက်များအတွက်တိုး, အထောက်အကူပြုပေမည်။
အရက်အပေါ်သုတေသနအသင်းအားဖြင့်မူပိုင်ခွင့်© 2014 ။
Dopamine; အီသနော; Norepinephrine; နျူကလိယ Accumbens; လူမှုအထီးကျန်ထားခြင်း